Questex dia manomboka ny fivoriana faha-10 any Karaiba fihaonam-be sy fifanakalozana famporisihana any Curaçao
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Curacao » Questex dia manomboka ny fivoriana faha-10 any Karaiba fihaonam-be sy fifanakalozana famporisihana any Curaçao
Aogositra 7, 2019
Questex nanokatra ny Fivolo-taona isan-taona momba ny fihaonan'ny Caribbean sy ny Travel Exchange (CMITE) androany tao amin'ny Santa Barbara Beach & Golf Resort any Willemstad, Curaçao.
CMITE dia mitondra planina fihaonana any Etazonia sy Kanadà mpividy fihaonana ary mpividy mandrisika miaraka amin'ny mpamatsy Karaiba mandritra ny roa andro sy sasany ateraky ny tambajotra manokana ary mandrindra fivoriana iraisana amin'ny efitrano manokana. Ny hetsika dia karakarain'ny mpiara-miasa amin'ny ECO DMS sy ny Curaçao Tourist Board.
"Manomboka am-piandohana ny hetsika CMITE, noho ireo fandraisana tambajotram-pifandraisana mahomby ary toerana vaovao mahafinaritra ho an'ireo mpanatrika ao Curaçao tsara tarehy," hoy i Jill Birkett, Talen'ny Event for Questex. "Ny portfolio-ntsika hetsika MICE irery ihany no manolotra fivoriana iray isaky ny miafina ny efitranon'ny trano fandraisam-bahiny sy ny hetsika tambajotra mahafinaritra, manome lanja lehibe ho an'ireo mpamatsy sy mpividy. Ny Santa Barbara Beach & Golf Resort dia manolotra fifangaroana tanteraka amin'ny toerana fivoriana, morontsiraka, golf ary hetsika fialantsasatra izay tadiavin'ny mpividy maro rehefa manomana ny hetsika any Karaiba manokana. ”
Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina ny hetsika izay nankafizan'ny vahiny ny sakafo maraina alohan'ny handehanany mankany amin'ny fanendrena manokana azy ireo. Hifarana ny andro amin'ny alàlan'ny fotoana hitsidihana an'i Marriott Curaçao mbola tsy nosokafana handray fandraisana sy fitsangatsanganana arahin'ny fitsidihana ny Renaissance Curaçao Resort sy Casino hisotroana zava-pisotro sy tsindrin-tsakafo ary handihizana eo ambanin'ny kintana eny amoron'ny ranon'i Willemstad, izay misy mpividy sy mpamatsy hanana fotoana hialana sasatra sy hiala sasatra raha mbola manohy manorina fifandraisana. Mampanantena ny herinandro fa hiravoravo amin'ny tsy fisian'ny fialamboly eo an-toerana, ny sakafo tena izy ary ny hetsika immersive ara-kolontsaina.
Ny mpamatsy dia misy sambo fitsangantsanganana an-tsambo, mpandraharaha fizahan-tany, orinasam-pitantanana toerana itodiana, toerana tadiavina, hotely, resort ary spa. Ny mpividy dia misolo tena ny sehatry ny fividianana famporisihana, ao anatin'izany ireo mpividy mandrisika ny orinasa sy ireo orinasa mandrisika, ary ireo miketrika fivoriana.
Ny hetsika MICE Questex Travel Group dia voaporofo fa mahomby amin'ny maha-mpikarakara tokana manolotra fivoriana manokana sy manokana, miaraka amin'ny fiofanana ambony sy ny tambajotran-tserasera fidirana ho an'ny matihanina amin'ny fihaonana sy ny hetsika, ary koa ny fanentanana mpividy.
Indeksan'ny fandanjana asa-piainana 2019: Iza amin'ireo tanàna no maka andro fialan-tsasatra betsaka indrindra?
Avy Avaratra ka hatrany atsimo ary atsinanana mankany andrefana, Israel no Land of Adventure